June 2020 - Page 2 of 3 - Puntland Mirror Believable Media Website
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex askari ayaa ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug maanta oo Axad ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyadu. Qaraxa oo ahaa gaari laga soo buuxshay walxaha […]
June 18, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa $17 milyan siinaya Soomaaliya si ay uga caawiso jawaabta dalka ee ku aadan xanuunka coronavirus, sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya maanta oo Khamiis ah. “Caawimaada ayaa gacan […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah meelmariyay ajandaha kalfadhigooda 46-aad ee socda. Waxyaabaha kamid ah ajandaha ayaa ah la xisaabtanka xukuumada, arrimaha xuduudaha Puntland iyo gobolada Sool iyo Sanaag, iyo dib […]
June 15, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in aysan marna ogolaan doonin natiijo walba oo ka soo baxda wadahadal lala galo maamulka Somaliland. Isaga oo ka hadlayay kalfadhiga 46-aad ee baarlamaanka Puntland oo maanta oo Isniin […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalfadhiga 46-aad ee golaha wakiilada Dowladda Puntland ayaa maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Garoowe. Kalfadhiga ayaa kamid ah labada kulan oo sanadlaha ah oo ay golaha baarlamaanka Puntland leeyihiin. Madaxweynaha Puntland […]
June 14, 2020 Puntland Mirror 0
Jabuuti-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Axad ah wadahadalo kula yeelatay maamulka Somaliland dalka Jabuuti. Wefdi uu kamidyahay Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi, si lamid […]
Somalia is resuming talks with the unrecognized government of breakaway region Somaliland, according to Djibouti President Ismail Omar Guelleh. A delegation including Somali President Mohamed Abdullahi and Somaliland leader Muse Bihi Abdi, as well as […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maanta oo Axad ah. “Shirkan ayaa ku saabsan sidii wadatashiyo ballaaran looga […]
June 13, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la filayaa in ay kulan ku yeeshaan dalka Jabuuti asbuucaan, sida ay sheegeen ilo-wareedyo kala duwan. Ajandaha rasmiga […]